Kedụ ihe i hụrụ na nrọ n'abalị pụtara? - BBC News Ìgbò
Kedụ ihe i hụrụ na nrọ n'abalị pụtara?
Nkenke aha onyonyo Nro nwere ọrụ abụọ ọ na-arụ na ndụ mmadụ
Ọtụtụ oge, ọ na-abụ mmadụ raghụcha ụra teta, onye agbataobi ya maọbụ nwaane ya ajụọ ya ihe ọ hụrụ na nrọ.
Nrọ bụ otu ihe so na ndụ mmadụ, ụfọdụ oge, onye rahụcha ụra ma ọ rọghị nrọ, ọ dị ya ka ụra ya ezughi ezu.
Mana ebe ụfọdụ na-eche na nrọ enweghi ihe ọ bụ, ndị ụfọdụ che na nrọ na-egosi ihe na-eme maọbụ ihe ga-eme na ndụ onye rọrọ ya.
Ube ọ bụ nrị e jị emegheri ọnụ ka ọ bụ nke na-enye ihe na ahụ?
Media captionAchọrọ m ịgụ egwu n'eluigwe - nwaanyị na-agụ egwú n'ahia
Nke a kpatara na ọtụtụ oge, onye rọchaa nrọ, ọ chọwa nkọwa ya ma chọwa ihe ọ ga-eme ma ọbụrụ na ọbụghị ezi nrọ.
E nwere nrọ ndị bụ ezi nrọ na ndị bụ ajọ nrọ, ihe na-akpata nke bụ nke bụ nkọwa e nyere ya.
Mana gịnị ka ụfọdụ nrọ mmadụ na-arọ pụtara?
1. Mmọnwụ na-achụ gị ọsọ
Ị nọ na nrọ na-agba ọsọ mmọnwụ maọbụ ihe na-atụ gị ụjọ a na-achụ gị ọsọ, ị na-achọ ịgbanarị ya ma na ọ dịka a kujiri gị ụkwụ. A na-akọwa na ụdị nrọ a na-egosi ihe ndị ị na-atụ ụjọ na ndụ gị maọbụ ihe ndị na-echere gị aka mgba. Ihe ndị nwereike ịbụ mmadụ ibe gị maọbụ gị onwe gị, i kwesiri isi ike guzosie ike ka gị na onye na-achụ gị kwata ya na nrọ ahụ ka ọ hapụ gị. Ụnụ lụọ ọgụ, ọ bụrụ na i tigbughi ya, ọ ga-etigbu gị mana e kwuru na ọ ka mma ma i tigbuo ya.
Mana iji ghọta ụdị nrọ a, jụọ onwe gị ụdị ihe ndị ị na-atụ ụjọ na ndụ gị maọbụ ihe ndị na-echere gị aka mgba, ka i nwee ike guzoro n'ụkwụ gị nweta ume hazie ọnọdụ ndị ahụ ka i nwere onwe gị. Dịka onye dọkịnta na-ahụ maka akọnauche bụ Chimezie Elekwachi Lekwa siri kwuo, ụdị nrọ a nwereike igosi ihe na-atụ mmadụ ụjọ nke ọ na-achọghị itinye echiche na ya.
2. I chọtara akpa ego maọbụ ihe ndị na-ada oke ego na nrọ
Nke a nwereike ịpụta ụfọdụ ihe dị icheiche.
a. I ji mmadụ ụgwọ na-enye gị nsogbu, ị na-achọ ụzọ i ga-eji kwụọ ụgwọ ahụ, ị hụ ebe i nwetara ego ịkwụ ya bụ ụgwọ na nrọ.
b. Egwu na-atụ gị na ihe i nwere nwereike nọkata ọ gaghị adịzi. Ụdị ụjọ a nwereike ime gị ịrọ ụdị nrọ iji kasie onwe gị obi na onweghi ihe na-eme.
c. Ụjọ na ihe i nwere agaghị ezuru gị. Nke a nwereike ime gị ị na-achụ ego n'ike n'ike churuo ya na nrọ.
Mana nsogbu na-adị bụ na n'ime ụdị nrọ a, ezigbo ụjọ na-esokwa ya mana ọ bụ ihe mmadụ ga-ajụ onwe ya,'onye nyere m ego ahụ, gịnị ka onye ahụ pụtara m? Kedụ ebe m nọ nweta ya bụ ego na nrọ ahụ? Gịnị ka m mere oge m hụrụ ya bụ ego, ọ bụ nke anya ukwu ka ọ bụ echiche?
3. Itufu agba ego maọbụ igodo gị na nrọ
Mmadụ itufu ntụpe maọbụ igodo na nrọ nwereike ịpụta na onye ahụ na-etufu ikike o nwere n'ihe dị ya oke mkpa.
4. Ịrọ nrọ na ị nọ ebe ị na-amaghị
Nke a nwereike igosi na ị na-achọ ifu ụzọ n'ihe ị na-eme maọbụ na mmadụ na-achọ ịghọrị gị.
Ọrụ nrọ na-arụ na ndụ mmadụ
BBC Igbo na dibia na-ahụ maka akọnauche bụ Chimezie Elekwachi Lekwas kpara nkata gbasara nrọ, ebe ọ kọwara na nrọ na-arụ ụzọ ọrụ abụọ na ndụ mmadụ.
O kwuru na mbụ, nrọ na-egosikarị ihe na-eme mmadụ ọ na-achọghị itinye uche na ya.
Ya bụ na mmadụ na-ahụ ụfọdụ ihe na nrọ, o kwesiri inyocha ime onwe ya hụ na ihe ahụ ọ na-ahụ abụghị ihe ọ na-agba nkịtị.
Nke abụọ, Lekwas kwuru na nrọ na-abụkwa ihe mere mmadụ maọbụ na-achọ ime mmadụ nke onye ahụ ma kama na ọ na-ekpuchi ya n'ike n'ike.
Ya bụ mmadụ nwereike ịgabiga ihe dị oke egwu nke ọ na-achọghị icheta, o mechaa, ihe ahụ a na-achụ ya na nrọ.
#Ipobsitathome: Ka o si gaa na Sept 14
Buhari anatala akwụkwọ arụkwaghịm n'aka Kemi Adeosun
A chọtala nwa m nwaanyị furu kemgbe Mee' - Nne nwa
Nigeria Air: Gọọmenti akwụsila ụgbọelu ha kwadoburu iwepụta
Ụmụ ole ka nne na nna kwesịrị ịmụ?
Iwu bụ na ị ga-eji 'ID card' gị na 2019 - NIMC